Maamulka Degmada Bosaso oo kulan ku aadan Amniga la yeeshay Masuuliyiinta Xaafadaha. – SBC
Maamulka Degmada Bosaso oo kulan ku aadan Amniga la yeeshay Masuuliyiinta Xaafadaha.
Posted by Webmaster on Noofember 5, 2011 Comments
Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay Xarunta Dowlada Hoose ee Degmada Boosaaso, waxaana isugu yimid Masuuliyiinta 16da xaafadood ee ku yaala magaaladan Boosaaso, Haweenka, iyo Maaamulka Degmada Boosaaso.
Kulankani ayaa ahaa mid lagu falanqeynayay Wadashaqeynta dhanka Amniga iyo kala warqaadashada xaafadaha Degmada Boosaaso iyo Maamulka Degmada, taas oo lagu xoojinayay Amaanka degmada Boosaaso.
Ugu horeyn waxaa halkaadi ka hadashay Khadro Dhuungale oo ah gudoomiyaha Ururka Haweenka degmada Boosaaso, waxaana ay sheegtay in Haweenku ay yihiin kuwo Marwalba garabtaagan Maamulka Degmada Dhinacyada kala gedisan ee Nabada iyo Horumarka, iyadoona xustay in ay Kashaqeynta Nabada Daraadeed ay u dhinteen Haween ka mid ahaa Masuuliyiinta Xaafadaha haatana ay wadashaqeynta dhanka Amaanka ay sii xoojinayaan.
Masuuliyiinta xaafadaha ayaa iyana halkaasi ka wada hadlay kana warbixiyay qaabka ugu haboon ee ay uwada shaqeyn karaan maamulka iyo 16da xaafadood ee ay ka koobantahay Magalada Boosaaso, waxayna halkaasi ka balanqaadeen in ay xoojinayaan wada shaqeynta iyo kashaqeynta Amaankaba.
Xasan Cabdalla Xasan Duqa Degmada Boosaaso ayaa isna halkaasi ka jeediyay Hadalo ku aadan Amniga iyo Horumarka Degmada Isagoo sheegay in muhiimada koobaad ay tahay wada shaqeynta Haweenka iyo Masuuliyiinta Xaafadaha .
Kulamadan waxa ay ku soo aadayaan xili maalmo ka hor isku shaandheyn lagu sameeyay masuuliyiinta xaafadaha degmada Boosaaso, taas oo ay maamulku sheegeen in ay u magacaabeen dad iyagu qibrad u leh ka wada shaqeynta amaanka .
SBC International Boosaaso..